Malezia : Tetikasa famoronana rejisitram-panjakana ahitàna an’ireo blaogera. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 8:55 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, עברית, English
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2009
Araka ny lahatsoratra vao haingana [amin'ny teny anglisy], nanambara i Datuk Seri Dr Rais Yatim, Minisitry ny kolotsaina sy ny serasera ao Malezia, fa mety ho voatery hanoratra anarana eo anivon'ireo manampahefana avokoa ireo blaogera rehetra mampiantrano ny tranonkalany any an-toerana. Araka ilay minisitra, anisan'ireo fepetra eritreretin'ny fanjakana mba hisorohana amin'ny fanafihan'ny votoaty ”fetsifetsy” na ”ratsy” mameno ny Aterineto ilay fanoratana anarana tsy maintsy atao.
Toa tsy manana olana amin'ireo blaogera manoratra anarana any aminy anefa ireo manampahefana.
Toa nanambara, hono, ny fanjakana fa naniry ny hanara-maso ny zavatra soratan'ireo Maleziana amin'ny aterineto amin'ny alalan'ity tolokevitra ity hoy i Ahirudin Attan, blaogera maleziana hajaina izay mitoraka blaogy ao amin'ny Rocky's Bru [amin'ny teny anglisy]. Toa nanamarina hono izy fa:
Mifanohitra amin'ny politikan'ny Fanjakana tsy hanivana ny Aterineto izany.
Araka i Ahirudin, hanosika ireo blaogera hampiantrano ny blaoginy any an-dafy fotsiny ity fanapahankevitra ity. Toa nilaza hono i Marina Mahattir, blaogera sy mpikatroka, fa tokony ”hiverina amin'ny tena zavamisy” ny fanjakana satria ” hahatonga an'i Malezia ho toy ny adala eo imason'izao tontolo izao” izany fanapahankevitra izany.
Etsy ankilany kosa, nihevitra ity fanapahankevitra ity ho toy ny hevitra tsara ny Minisitra maleziana misahana ny kolontsaina, ny serasera sy ny vaovao, na dia tokony mbola hodinihina amin'ny antsipirihany tsara aza izany. Nanampy izy fa tokony ho hajain’ ireo blaogera foana ny lalàna efa mipetraka momba ny fanalana baraka sy ny fikomiana. Toa nanambara ihany koa, hono, izy [amin'ny teny anglisy]:
… Mandinika lalàna vaovao izahay, karakaraina efa ho telo taona izao. Tokony ho famenon'ny lalàna mikasika ny serasera sy ny fampahalalam-baovao sy ny ‘multimedia’ tamin'ny 1998 ity lalàna ity.
Tonga taorian'ny fotoana vitsy nanaovana ireo tsoakevitra vao haingana tamin'ny fanadihadiana [amin'ny teny anglisy] ity vaovao ity, izay milaza fa eo amin'ny 500 000 eo ny blaogera mavitrika ao amin'ny firenena, izay manasokajy an'i Malezia ho anisan'ireo firenena mitoraka blaogy betsaka indrindra, miaraka amin'ny Indonezia na ireo an'ny Firaisambe Eoropeana.
Araka ny Dokotera Abu Hassan Hasbullah, profesora ao amin'ny departemantan'ny haino aman-jery ao amin'ny Anjerimanontolo Malaya, very ireo maroanisa roa ampahatelony mahazatra an'ny fanjakana ankehitriny tamin'ny fifidianana farany teo, indrindra noho ireo blaogy.